एजेन्सी । चिनियाँ युवतीहरु आफ्नो चम्किलो, बेदाग अनि नरम छालाको लागि चिनिन्छन्। वास्तवमा यस्तो छालाको पछाडी लुकेको छ उनीहरुको घरेलु तथा पारम्परिक तरिका। यसमा सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यी उपाय हामीले पनि अपनाउन सक्छौ।
जवान देखिन ग्रिन टि
सफा अनुहारको लागि चिनियाँ युवतीहरु पुदिना प्रयोग गर्छन्। पुदिनाको पात पिसेर अनुहारमा लगाएर सुकेपछि धुन सकिन्छ।
६ दिनसम्म श्रीमतीको लाससँगै सुते यी पुरुष, उनको यो हालत देखेर आफन्तहरुको थामिएन आशु
एजेन्सी । पत्नीको शवसँगै उनी बसिरहँदा धेरै आफन्तहरु उनलाई भेट्न आए । उनको हालत देखेर आगन्तुकहरु भक्कानिएर रुन्थे । उनले पत्नीलाई यति धेरै माया गर्दथे की उनी आफ्नी पत्नीको शवलाई डाक्टरको हातमा सुम्पिन चाहन्नथे….
त्यसपछि उनी सोही बेडरुममा पत्नीको शवसँगै बस्न थाले, त्यहीँ सुत्न थाले । पूरै ६ दिनसम्म उनी पत्नीको शवसँगै बसे । श्रीमतीको शवसँगै ६ दिन बस्दा आफुलाई धेरै आत्मशान्ति मिलेको उनी बताउँछन् । पत्नीको शवसँगै उनी बसिरहँदा धेरै आफन्तहरु उनलाई भेट्न आए । उनको हालत देखेर आगन्तुकहरु भक्कानिएर रुन्थे ।
मानिस एकदिन मर्नैपर्छ । तर मृत्युको कुरा गर्न सबै डराउँछन् र मानिस मरिसकेपछि जतिसक्दो चाँडो शवलाई अन्त्येष्टिका लागि कुदाउँछन् । तर आफुले मृत्युलाई नजिकबाट अनुभुति गर्ने र मृत्युपछिको पलमा पनि पत्नीको राम्रो हेरचाह गर्ने अभिलाषा बोकेको हुँदा आफुले कुनै शवदाह गृहमा लगेर पत्नीको लासलाई तत्कालै नबुझाएको उनी बताउँछन् । ६ दिन घरमा राखिसकेपछि मात्र उनले पत्नीको शवलाई अन्त्येष्टि गर्न आफै लगे । – नेपालीन्यूजबाट
संसारमा यस्तो पनि ठाउँ छ, जहाँ पुरुष नपाएर अविवाहित महिला छटपटाउछन् !
एजेन्सी । उमेर ढल्किँदै जाँदा बिहे गर्ने एउटा पनि केटा नपाएपछि सहरभरिका केटीहरुले सामूहिक रुपमा केटा पाउँ भन्दै गुहार मागेका छन् ।यो ब्राजिलको घटना हो । ब्राजिलको नोइभा डो कोर्डेरियो सहरमा एकजना पनि अविवाहित पुरुष छैनन् । तर ६ सय जना अविवाहित महिला छन् । ती मध्ये अधिकांस ३५ वर्ष मुनिका तरुनी छन् ।
महिलाले नै भरिएको त्यो सहरमा महिलाकै बोलवाला छ । तर भएर के गर्नु ? पुरुष नपाएर अविवाहित महिला छटपटाउन थालेका छन् । उनीहरुले हालै एक सामूहिक अपिल गरेका छन् अविवाहित केटाहरुलाई आफुसँग सम्बन्ध गाँस्न अनुरोध गर्दै ।ब्राजिलको यो सहर मात्र होइन रुसमा पनि हालत यस्तै छ । केटाहरुको संख्या निकै कम छ केटीहरुको भन्दा जसका कारण महिलाहरुले जस्तो पाएपनि केटा खोजेर बिहे गर्नैपर्ने अवस्थामा छन् ।
यता चीनमा भने महिलाको खडेरी छ र एकल पुरुषहरुको संख्या बढिरहेको छ । भनिन्छ, भविष्यमा चीनका २५ प्रतिशत पुरुष कि त अविवाहित बस्नुपर्छ कि त जस्तो पाएपनि केटी खोजेर बिहे गर्नुपर्छ ।-अनलाइनखबरबाट